Weerar lagu dilay ku dhawaad 100 Qof
Tuesday June 11, 2019 - 10:58:13 in Wararka by Mogadishu Times
Ku dhawaad boqol qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taalla bartamaha dalka Mali Isniintii, sida ay sheegeen mas'uuliyiin. Ma jirin cid si deg deg ah u sheegatay mas'uuloyadda xasuuqaasi lala bartilmaameedsaday dadka deggan tuula
Ku dhawaad boqol qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taalla bartamaha dalka Mali Isniintii, sida ay sheegeen mas'uuliyiin. Ma jirin cid si deg deg ah u sheegatay mas'uuloyadda xasuuqaasi lala bartilmaameedsaday dadka deggan tuulada, gaar ahaan bulshada Dogon. Dagaallo u dhaxeeya qowmiyadaha dega halkaasi ayay boqollaal qof hore ugu dhinteen. Waxa uu weerarkaasi imaanaya wax ka yar 3 bil, kadib markii koox la sheegey inay ka tirsanaayeen qowmiyadda Dogon ay dileen 160 qof oo ka tirsan qowmiyadda Fulani.
Waxa uu dadka reer Mali ugu yeerey inay isku yimaaddaan oo ay ogolaadaan in dalka uu samatabaxo, waayo buu yiri, "tani waa calaamad su’aal la xiriirta samatabax.”
Saraakiil ku sugan degmada Koundou ayaa u sheegey wakaaladda AFP in tuulada Sobane-Kou ay soo weerareen koox hubeysan, ayna halkaasi ku dileen 95 qof. 19 qof ayay dowladdu sheegeysaa in sidoo kale la la’ yahay